Ipulazi i-Sítio Itapetininga p15 abantu c. ichibi - I-Airbnb
Ipulazi i-Sítio Itapetininga p15 abantu c. ichibi
Itapetininga, São Paulo, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Fabio
Ipulazi elihle, elinobumfihlo obuningi, ichibi elikhulu, izoso, izihlahla eziningi zezithelo, umfula wokudoba, indlu yezihlahla yezingane, konke kunikezwe impahla, ikhona lechibi kanye nokuthula.
Ufuna indawo yokubutha abangani nomndeni, ngalokho kuthula okusenza siphumule emisebenzini yethu, ngokuhlabelela kwezinyoni, izingwejeje ezizulazula ezihlahleni, izihlahla zezithelo eziningi. Kuthiwani uma ufuna ukudoba? Khona-ke uya phansi emhlabeni futhi uthole umfula i-Itapetininga ukulindile!
Ngaphezu kwakho konke lokho, i-swimming pool enhle, indawo yokosa inyama, indlu yesihlahla yezingane, enefenisha ephelele, i-pool corner, indawo yokuphumula yokudlala amakhadi, amagumbi okugeza amabili (elilodwa elingaphakathi nelilodwa ngaphandle), amagumbi amane okulala, igumbi lokuphumula elikhulu.
Indlu iyodwa inama-m2 angaba ngu-200, kodwa, ngaphezu kwalokho, sinendlu yamathuluzi kanye nomthombo wezwe. amaphuzu amaningana ukubeka inetha.
Futhi bangaki abantu abahlaliswe kahle? Okungenani abantu abangu-15, njengoba amakamelo anemibhede emibili nemibhede emikhulu.
So, ake sibone izithombe???
imibhede eyidabuli engu- 2, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, Umbhede ongu-1
Indawo yaseTupy / Itá Recreio lapho ipulazi litholakala khona emgwaqweni owubhuqu onokufinyelela okuyingqayizivele eqenjini lamapulazi angomakhelwane, okwenza indawo ibe yimfihlo kakhulu, ithule futhi iphephile. Umgwaqo owubhuqu ugcinwe kahle kakhulu, njengoba kukhona amasimu e-eucalyptus azungezile, ahlala eqoqwa ngamaloli, futhi ngenxa yalesi sizathu, ukugcinwa kuhlale kusesikhathini samanje.
Ngizotholakala ngocingo kukho konke ukuhlala kwakho.
Umnakekeli wepulazi angakwazi ukuzisiza mathupha uma isivakashi sidinga usizo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Itapetininga namaphethelo